Kusolwa umfundisi ngokufa komfana (13) - Ilanga News
Home Izindaba Kusolwa umfundisi ngokufa komfana (13)
‘Umbulali’ uthi ubethenjiswe ngumfundisi isizumbulu semali
UQOKE ukuzinikela esiteshini samaphoyisa sendawo owesilisa (29), waseManzibomvu, eMbazwana, ebalekela ulaka lomphakathi emuva kokutholakala kwesidumbu somfanyana sinezimpawu zokucwiywa, maqede sathungelwa ngomlilo. Isidumbu sikaThobani Khambule
(13), satholwa wumphakathi ngeSonto silahlwe ehlathini eliseduze kwendlela eya esontweni esigodini saseMntanenkosi. Kubikwa ukuthi isisulu nomsolwa bahlala ezigodini ezahlukene, ezingomakhelwane. Udaba lwaqala ngoMgqibelo ekuseni ngenkathi kufika umsolwa (ILANGA elinalo igama lakhe), wabiza umufi ukuba amphelezele baye edlelweni, bayokwelusa izinkomo.
Babuya ngezithuba zasemini yantambama. Umufi ubehlala noninakhulu, uninalume nezinye izingane okungabazukulu (bakaninakhulu) akasenabo abazali. Ngokusho kukaMnu Sanele Khanyile, onguninalume kamufi, umshana wakhe waphuma kubo ngoMgqibelo waya kwamakhelwane, akabange esabuya. Kuvela ukuthi watshela enye ingane encane kunaye ukuthi uyolanda izimpahla zakhe aziphiwe ngumfundisi omtshele ukuthi makafike ehamba yedwa uma eseyozilanda. UMnu Khanyile uthi kuthe besakhungathwe wukuthi umshana
wakhe akabuyanga, kwafika umyalezo wokuthi kutholakale isidumbu somfanyana singenalo ikhanda.
Uthi kuthe uma besibheka, bathola ukuthi ngesomshana wakhe. Uveze ukuthi ngoLwesibili kutholakale ikhanda likamufi endlini yangasese, emzini womunye wabefundisi abamaziyo endaweni. Uthi umphakathi ubuvele “umnuka”, umsolwa kanti sekuzofika uyise eyozilahla emndenini wakwaKhanyile ngesenzo sendodana yakhe. Uthi uyise kamsolwa ufike ehamba nenduna yaseManzibomvu nesigungu sayo. “Uyise walo mfana usitshele ukuthi uzwile ngesigameko esenzekile lapha endaweni futhi kusolwa indodana yakhe. “Uthi uhlale nayo (indodana) wayiphenya. Uthe akubanga nzima ngoba ivele yachaza konke ukuthi imbulele kanjani umshana, yathi iqashwe ngumfundisi okutholakale ikhanda endlini yangasese emzini wakhe. “Usitshele ukuthi indodana inxuswe ngumfundisi ngesethembiso sokuthi uzoyikhokhela isizumbulu semali.
Uthi indodana yakhe ithe ilingekile uma izwa ngemali. “Ikhanda lengane litholakale ligcinwe emakhazeni. “Izimpahla zakhe umsolwa ezigcwele igazi, zikhona lapha ekhaya, kodwa kasazi ukuthi kungani amaphoyisa engazithathanga ukuze kuzogcwaliseka ubufakazi enkantolo,” kusho uMnu Khanyile. Uthe banethemba lokuthi ingalo yomthetho izosebenza kuze kube baboshwa bonke abathintekayo kulolu daba. “Siyakholwa ukuthi abomthetho bazolusebenza kahle lolu daba, kuboshwe bonke abathintekayo njengoba umsolwa wokuqala ezinikele futhi akazamanga ngisho ukubaleka endaweni. “Uyise kamsolwa uxolisile emndenini wakwaKhanyile ngesenzo sendodana yakhe.
Uthembise ukuyithwala ingxenye yezindleko zokufihla umshana wethu. “Siyafisa ukukusho ukuthi siyakwemukela ukusiza kwakhe, kodwa ngeke sikwazi ukuxola ingagwetshiwe indodana yakhe. Thina kasinayo inkinga noyise kamsolwa, umuntu esinenkinga naye yilona obulale umshana wethu. “Le ngane ibikhuliswa ngumama ongizalayo ngemali yempesheni. Udadewethu noyise kudala badlula emhlabeni,” kusho uMnu Khanyile. Ikhansela lendawo, uNkk Jabulile Zikhali, lithe lishaqekile ngalesi sigameko. Lithe bazozama konke okusemandleni ukufaka ingcindezi yokuba kuboshwe abathintekayo, futhi bajeze ngesenzo sabo.
“Sizocela inkantolo iqinise isandla uma isikhipha isigwebo njengoba umsolwa eseze wazinikela emaphoyiseni. “Siyanxusa ukuba umphakathi ubambisane namaphoyisa ukuze kuqinisekiswe ukuphepha kwezingane nabantu besifazane,” kusho uNkk Zikhali. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uLt Col Nqobile Gwala, usiqinisekisile lesi sigameko, wathi amaphoyisa abophe umsolwa ngecala lokubulala emuva kokuzinikela emaphoyiseni. www.ilanganews.co.za
Previous articleBAKHUNGATHEKILE NGOMBIKO WOLIBOFUZO “ONGAPHELELE”
Next articleKuvela elikaKelly kwelokufa kukaMeyiwa